फ्लोनेज बनाम नासाकार्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण समुदाय, कम्पनी स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार कम्पनी, समाचार कम्पनी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य प्रेस चेकआउट खेलहरु घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> फ्लोनेज बनाम नासाकार्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
फ्लोनेज बनाम नासाकार्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
बहेको नाक, खुजली, पानी आँखा — ‘यो मौसमी एलर्जीको लागि मौसम हो। यदि तपाईं मौसमी वा बारहमासी एलर्जीबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईं एक्लैले छुंकिरहनु भएको छैन। Million करोड भन्दा धेरै अमेरिकीहरू हरेक वर्ष एलर्जीबाट ग्रस्त हुन्छन्।
फ्लोनेज (फ्लूटिकासोन प्रोपियोनेट, वा फ्लुटिकासोन) र नासाकोर्ट (ट्राइमिसिनोलोन एसेटोनाइड, वा ट्राइमिसिनोलोन) दुई लोकप्रिय औषधिहरू हो जुन एलर्जी राहतको लागि प्रयोग गरिन्छ। तिनीहरू औषधीको वर्गमा छन् जसलाई ग्लुकोकोर्टिकोइड्स भनिन्छ, अधिक स्टेरोइड भनेर चिनिन्छ। नाक स्टेरोइड्स कम काम गरेर तपाईंको नाकमा सूजन र भीड कम, लक्षण सुधार। यद्यपि दुबै औषधिहरूलाई स्टेरोइडहरू भनेर चिनिन्छ, तिनीहरूसँग केहि उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल रूपरेखा बनाउँछौं।
फ्लोनासे र नासाकोर्ट बीचका मुख्य भिन्नताहरू के के हुन्?
फ्लोनेज (फ्लूटिकासोन) र नासाकोर्ट (ट्राइमिसिनोलोन) दुबै नाक कोर्टीकोस्टेरोइड हो उपचार गर्न प्रयोग गरिने एलर्जी । धेरै वर्ष अघि दुबै औषधिहरू केवल एक प्रिस्क्रिप्शनसँग मात्र उपलब्ध थिए, तर अब ओभर-दि-काउन्टर (OTC) मा उपलब्ध छन्। दुबै औषधि वयस्क र बच्चाहरूको फार्मुलेशनमा उपलब्ध छन्।
Flonase अझै पनि एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रगको रूपमा उपलब्ध छ, यसको जेनेरिक, fluticasone को रूपमा। वयस्क र बच्चाहरूको फार्मुलेशनमा पनि सेन्सिमिस्टमा फ्लोनेज उपलब्ध छ, जसले अधिक कोमल धुंध प्रदान गर्दछ। दुबै औषधिहरू बच्चाहरू र वयस्कहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर नासाकार्ट २ बर्ष र सो भन्दा बढि बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जबकि फ्लोनेज years बर्ष वा सो भन्दा बढि बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
फ्लोनासे र नासाकार्टको बीचमा मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग नाक कोर्टीकोस्टेरोइड नाक कोर्टीकोस्टेरोइड
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति OTC: ब्रान्ड (फ्लोनाज एलर्जी राहत) र जेनेरिक
Rx: जेनेरिक ओटीसी मात्र: ब्रान्ड (नासाकार्ट एलर्जी २ 24 घण्टा) र जेनेरिक
जेनेरिक नाम के हो? Fluticasone propionate Triamcinolone acetonide
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? नाक स्प्रे
बच्चाहरूको नाक स्प्रे
कोमल धुंध स्प्रे
बच्चाहरू कोमल धुंध स्प्रे नाक स्प्रे
मानक खुराक के हो? वयस्क: २ स्प्रे (प्रत्येक स्प्रे प्रति m० एमसीजी) प्रत्येक नाकपुरीमा दैनिक (वैकल्पिक रूपमा, प्रत्येक नाकमा १ स्प्रे हरेक दिन दुई पटक प्रयोग गर्न सक्दछ)
किशोरावस्थाका बच्चाहरू, years बर्ष र माथिका बच्चाहरू: प्रत्येक नाकको नालामा १ स्प्रे (अस्थायी रूपमा प्रत्येक नाकको नाकमा २ स्प्रे बढ्न सक्छ, र लक्षणहरू नियन्त्रण भए पछि फेरि कम हुन्छ) वयस्क: २ स्प्रे (प्रति स्प्रे 55 55 एमसीजी) प्रत्येक नाकमा एक पटक दैनिक। एक पटक लक्षणहरू नियन्त्रण भएपछि, दैनिक एक नाकमा १ स्प्रेमा कम गर्नुहोस्
बच्चाहरू २ देखि मुनिका: देखि १: १ स्प्रे प्रत्येक नाकपुँठाहरूमा दैनिक
बच्चाहरूको उमेर to देखि १२ बर्ष भन्दा कम: १ दिनको प्रत्येक नाकपुँजामा स्प्रे (अस्थायी रूपमा प्रत्येक नाकको नाकमा २ स्प्रे बढ्न सक्छ, र लक्षणहरू नियन्त्रण भए पछि फेरि कम हुन्छ)
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि वा लामो अवधि, लक्षण र डाक्टरको निर्देशनमा निर्भर गर्दछ
* यदि तपाईको बच्चाले बर्षमा २ महिना भन्दा बढी प्रयोग गर्नु पर्छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् छोटो अवधि वा लामो अवधि, लक्षण र डाक्टरको निर्देशनमा निर्भर गर्दछ
* यदि तपाईको बच्चाले बर्षमा २ महिना भन्दा बढी प्रयोग गर्नु पर्छ भने डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क, किशोर, उमेर4र माथिका बच्चाहरू वयस्क, किशोर, उमेर २ र माथिका बच्चाहरू
शर्तहरू फ्लोनासे र नासाकार्ट द्वारा उपचार
फ्लोनाज र नासाकार्ट नाकको एलर्जीको लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरू मौसमी वा बारहमासी एलर्जी लक्षणहरूको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। फ्लोनेज र नासाकार्ट पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ अफ-लेबल धेरै सर्तहरूको लागि जस्तै नाक पोलिप्स र जीर्ण वा भाइरल राइनोसिनुसाइटिस (वा ब्याक्टेरियाल राइनोसिनुसिटिस एन्टिबायोटिकको अतिरिक्त)।
सर्त फ्लोनेज नासाकार्ट
मौसमी वा बारहमासी nonallergic राइनाइटिस को नाक लक्षणहरूको व्यवस्थापन हो (उमेर4र अधिक) हो (उमेर २ र अधिक)
घाँटी ज्वरोबाट राहत / अन्य माथिल्लो श्वास एलर्जीहरूको राहत हो हो
नाक polyps को उपचार अफ-लेबल अफ-लेबल
तीव्र बैक्टीरियल राइनोसिनोसिटिस, एन्टिबायोटिकमा संयोजित अफ-लेबल अफ-लेबल
जीर्ण राइनोसिनुसिटिस अफ-लेबल अफ-लेबल
भाइरल rhinosinusitis लक्षण राहत अफ-लेबल अफ-लेबल
के फ्लोनेज वा नासाकार्ट अधिक प्रभावकारी छ?
भर्खरको अध्ययन २ of दिनको उपचार पछि पाए कि फ्लोनाज र नासाकार्ट नाकबाट एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न समान प्रभावकारी छन् र दुवै सहिष्णु छन्। अर्को अध्ययन देखायो कि फ्लोनासे र नासाकार्ट समान सुरक्षित, प्रभावकारी, र राम्रो-सहिष्णु छन्।
तपाईंको लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईं र तपाईंको डाक्टरले निर्धारित गर्नु पर्दछ, जसले तपाईंको मेडिकल अवस्था (हरू), इतिहास, र तपाईंले लिनुहुने अन्य औषधीहरू लिन सक्दछ।
कभरेज र लागत तुलना फ्लोनेज बनाम नासाकार्टको
फ्लोनेज सामान्यतया बीमाको साथ साथै मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा जेनेरिक फ्लुटिकासनको प्रिस्क्रिप्शन फाराममा कभर गरिएको हुन्छ, तर ओटीसी संस्करण प्राय: कभर हुँदैन। जेनेरिक फ्लुटिकासोनको लागि मेडिकेयर पार्ट डी कोपे ० $ ०- $ २० सम्ममा। फ्लोनेसको लागत $ over० भन्दा बढी हुन सक्छ तर सिंगलकेयर फार्मेसी कूपनको साथ $ १२- $ २ low भन्दा कममा किन्न सकिन्छ।
हामी राती किन बढी खोकीन्छौं?
नासाकार्ट मात्र ओटीसीमा उपलब्ध छ र सामान्यतया बीमाले ढाक्दैन (केही राज्य मेडिकेड योजनाहरू जेनेरिकलाई भुक्तान गर्न सक्दछ) वा मेडिकेयर भाग डी। नासाकोर्टको खुद्रा मूल्य सामान्यतया $ २० भन्दा बढी हुन्छ तर तपाईं यसलाई सहभागी pharma फार्मसीमा १$.50० भन्दा कमसम्म लिन सक्नुहुनेछ। एकलकेयर कूपनको साथ।
सामान्यतया बीमा द्वारा कभर? OTC: होईन
Rx: हो हैन
सामान्यतया चिकित्सा द्वारा कभर? OTC: होईन
मानक खुराक १ इकाई १ इकाई
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ २० N / a
एकलकेयर लागत $ १२- $ २ $ १..50० +
फ्लोनेज बनाम नासाकार्टको साझा साइड इफेक्टहरू
दुबै औषधि राम्रोसँग सहन गरिन्छ। फ्लोनासका सबैभन्दा सामान्य लक्षणहरू भनेको टाउको दुख्ने, बान्ता / बान्ता, दमको लक्षण, र खोकी हो। नासाकार्टको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, दमको लक्षण, र खोकी हो। दुबै औषधिहरूको लागि सूचीबद्ध अन्य साइड इफेक्टहरू प्लेसबो (निष्क्रिय औषधि) को रूपमा उस्तै उदासीनतामा देखा पर्दछ, जस्तै नाकबिच्छाहरू र घाँटी दुखाइ।
यो साइड इफेक्टको पूर्ण सूची होइन; अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुखाई हो .6.-16-१-16.१% हो .5.%%
मतली / बान्ता हो २.6--4.%% हैन -
दमको लक्षण हो 3.3-7.२% हो २.%%
खोकी हो 6.6--3.%% हो > २%
स्रोत: डेलीमेड ( फ्लोनेज ), एफडीए लेबल ( नासाकार्ट )
फ्लोनसेज बनाम नासाकार्टको ड्रग अन्तर्क्रिया
फ्लोनेज साइटोक्रोम-पी procesto० A ए called भनिने इन्जाइमद्वारा प्रक्रिया गरिन्छ, अन्यथा CYP3A4 को रूपमा चिनिन्छ। केहि ड्रग्सले यो एन्जाइमलाई रोक्छ, र यसलाई फ्लोनेजको प्रसंस्करणबाट ढिलो बनाउँदछ, जसले फ्लोनेजको निर्माणमा अग्रसर गर्दछ, र स्टेरोइड साइड इफेक्टहरू बढाउँदछ। तसर्थ, यी कडा अवरोधहरूलाई फ्लोनासेसँग लिनु हुँदैन। नासाकार्टसँग कुनै औषधि अन्तर्क्रिया जानकारी उपलब्ध छैन। अन्य अन्तरक्रिया सम्भव हुन सक्छ; चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग जाँच गर्नुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास फ्लोनेज नासाकार्ट
लोपीनाभिर, भोरिकोनाजोल कडा CYP3A4 अवरोधकर्ताहरू हो हैन
फ्लोनास र नासाकार्टको चेतावनी
हुन सक्ने स्थानीय प्रभावहरू नाकबिछी, नाकको अल्सरेशन, स्थानीय क्यान्डिडा (खमीर) संक्रमण, नाक सेप्टल छिद्र, र बिरामी घाउ उपचार हुन्।
स्टेरोइडको कारण जलबिन्दु वा मोतियाबिन्द हुन सक्छ। यदि तपाईसँग दृष्टिमा कुनै परिवर्तन आएको छ वा यदि तपाईसँग इन्ट्राअकुलर दबाव, जलबिन्दु, र / वा मोतियाबिंदको इतिहास छ भने तपाईलाई नियालेर हेर्नु पर्छ। यदि तपाईं Flonase वा Nasacort दीर्घकालीन प्रयोग गर्नुहुन्छ वा कुनै आँखा लक्षण छ भने, तपाईं नेत्र रोग विशेषज्ञसँग नियमित रूपमा अनुसरण गर्नुपर्छ।
यदि अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो (छालाका लक्षणहरू, सास फेर्न समस्या, अनुहारको सुजन), फ्लोनेज वा नासाकोर्ट बन्द गर्नुहोस् र आपतकालीन चिकित्सा सहायता लिनुहोस्।
किनभने स्टेरोइडहरूले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई दबाउँदछ, तपाईं स्टेरोइड अनुनासिक स्प्रे प्रयोग गर्दा संक्रमणहरूको बढी खतरामा हुनुहुन्छ।
बच्चाहरूले विकास वेग मा कमी अनुभव गर्न सक्दछ; वृद्धिलाई नजिकबाट अनुगमन गरिनु पर्छ। थोरै सम्भावित खुराक, कम समयको लागि, प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
विरलै, एड्रेनल दमन हुन सक्छ, र नाक स्टेरॉइड बिस्तारै बिस्तारै टेपर गरिनु पर्छ (अचानक रोकिदैन)।
किनभने त्यहाँ नाक स्टेरोइडको बारेमा पर्याप्त डेटा छैन गर्भावस्था , यदि तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने तपाईंले Flonase वा Nasacort लिनु अघि आफ्नो डाक्टरसँग सल्लाह लिनु पर्छ। यदि तपाईं पहिले नै फ्लोनेज वा नासाकोर्ट लिइरहनु भएको छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने, निर्देशनका लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
फ्लोनेज बनाम नासाकार्टको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
फ्लोनेज नाक स्टेरोइड हो जसले एलर्जीका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ। सक्रिय संघटक फ्लुटिकासोन प्रोपियनेट हो। यो एक ब्रान्ड र जेनेरिकको रूपमा OTC उपलब्ध छ, र यसको जेनेरिक फाराममा प्रिस्क्रिप्सन द्वारा। यो वयस्क र children बर्ष वा माथिका बच्चाहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कटौती योग्य र अधिकतम पकेट बाहिर को बीच फरक
नासाकार्ट भनेको के हो?
नासाकार्ट एक नाक स्टेरोइड हो जुन एलर्जीको लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दतको लागि प्रयोग गरिन्छ। नासाकार्टमा सक्रिय संघटक ट्राइमिसिनोलोन हो। यो दुबै ब्रान्ड र जेनेरिकमा ओटीसी उपलब्ध छ। नासाकार्ट वयस्कहरूमा र २ बर्ष उमेरका बच्चाहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
के फ्लोनासे र नासाकार्ट एकै छन्?
फ्लोनास र नासाकार्ट धेरै समान छन् र त्यस्तै धेरै प्रयोग र चेतावनीहरू छन्। जे होस्, तिनीहरूसँग केहि उल्लेखनीय भिन्नताहरू छन्, जस्तै सक्रिय घटक, औषधि अन्तर्क्रिया, र मूल्यमा, जसरी माथि वर्णन गरिए। अन्य औषधीहरू नाक स्टेरोइड कोटीमा तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ Rhinocort (बुडेसोनाइड), QNasl (Beclometasone), र Nasonex (मोमेटासोन)। फ्लोटिकासोन ब्रान्ड-नाम डिमिस्टाको रूपमा मिलन औषधिको रूपमा पनि उपलब्ध छ, जुन समावेश गर्दछ फ्लुटिकासोनको साथ एजेलास्टाइन ।
के फ्लोनासे वा नासाकार्ट राम्रो छ?
दुबै औषधिहरू अध्ययनमा धेरै राम्रोसँग सहन गरिएको, र लक्षणहरू सुधार गर्न प्रभावकारी पाइएको छ। यो पत्ता लगाउनको लागि केहि परीक्षण र त्रुटि लिन सक्दछ यदि फ्लोनेज वा नासाकार्ट तपाईंको लागि राम्रो छ भने।
के म गर्भवती हुँदा फ्लोनेज वा नासाकार्ट प्रयोग गर्न सक्छु?
त्यहाँ पर्याप्त डेटा छैन, त्यसैले उत्तम छ तपाईको एलर्जीका लक्षणहरू तपाईको डाक्टरसँग छलफल गर्न र उनी / उनीले सुझाव दिईरहेछन् हेर्नु उत्तम हुन्छ। यो गर्भावस्थामा आवश्यक छ भने Flonase वा Nasacort लिन सुरक्षित हुन सक्छ, तर यो व्यक्तिगत केसमा निर्भर गर्दछ, त्यसैले तपाईंको डाक्टरलाई सोध्नु सबैभन्दा सुरक्षित हुन्छ।
म Flonase वा Nasacort रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
फ्लोनेज वा नासाकार्ट हुन् रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सुरक्षित । जहाँसम्म, यदि तपाईं आफ्नो एलर्जी लक्षणहरूको लागि अन्य औषधीहरू लिईरहनु भएको छ भने, आफ्नो डाक्टर वा फार्मासिष्टको साथ जाँच गर्नुहोस् कि ती औषधीहरू रक्सीको साथ उपयुक्त छ कि छैन।
कुन नाक एलर्जी स्प्रे सबैभन्दा प्रभावकारी छ?
त्यहाँ नाक एलर्जी स्प्रे को एक किस्म हो, र केहि फरक तरिकाले काम। जबकि फ्लोनेज र नासाकार्ट जस्ता औषधीहरू स्टेरोइडहरू हुन्, केही नाक एलर्जी स्प्रेहरूमा एजेलास्टाइन जस्ता अन्य तत्वहरू हुन्छन् जुन एन्टिहिस्टामाइन हो र स्टेरोइडभन्दा फरक काम गर्दछ। धेरै व्यक्तिहरू अफ्रिन नाक स्प्रे जस्तै; जे होस्, तपाई प्रयोग गर्न धेरै सावधान हुनु पर्छ यो औषधि केवल days दिन वा कमको लागि, अन्यथा यसले कारण निम्त्याउन सक्छ रिवाउन्ड भीड । सब भन्दा प्रभावकारी एलर्जी स्प्रे एक हो जुन तपाईको लागि उत्तम काम गर्दछ, र यसले केही परीक्षण र त्रुटि लिन सक्दछ कुन एलर्जी स्प्रेले उत्तम कार्य गर्दछ भनेर निर्धारण गर्न।
के नासाकोर्ट साइनस संक्रमणका लागि राम्रो छ?
जबकि नासाकोर्टले साइनस संक्रमणको कारणले गर्दा हुने नाकका केही लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, यसले संक्रमण आफैंमा उपचार गर्दैन। यदि तपाईलाई ब्याक्टेरियस साइनस संक्रमण छ भने तपाईले डाक्टरले तोकेको एन्टिबायोटिक लिनु पर्छ।
के फ्लोनसेसले साइनस प्रेशरलाई मद्दत गर्दछ?
फ्लोनसेस साइनस लक्षणहरू ब्यवस्थापन गर्न धेरै सहयोगी हुन सक्छ। यद्यपि, यदि साइनस प्रेशर ब्याक्टेरियाको संक्रमणको कारणले भएको हो भने, फ्लोनेजले लक्षणहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछ तर संक्रमण खाली गर्दैन। यदि तपाईलाई ब्याक्टेरियाको संक्रमण छ भने तपाईले प्रिस्क्रिप्शन एन्टिबायोटिक लिनु पर्छ।
चिसो को लागी काउन्टर decongestant भन्दा राम्रो
कुन तापमान वयस्कहरुमा ज्वरो मानिन्छ
मैले कति मेलाटोनिन चक्की लिनु पर्छ?
चिसो को लागी काउन्टर औषधि भन्दा राम्रो
कति समय लाग्छ restasis काम गर्न को लागी